बिहानै पाथीभरा देबिको दर्शन गरी हेर्नु-होस आजको राशिफल ! – Nepal Online Khabar
भाद्र १९, २०७८ शनिबार 474
बुवा तथा बुवा सरहका ब्याक्तिबाट भरपुर सहयोग प्राप्त हुने भने बिद्या तथा बादबिवाद प्रतियोगितामा प्रतियोगिहरुलाई हराउँदै अगाडि बढ्न सकिनेछ । मान सम्मान तथा ईज्जत प्रतिष्ठामा बृद्धि भएर जानेछ । नयाँ काम पाउने तथा बढुवा हुने योग रहेको छ । आम्दानिका नयाँ नयाँ स्रोतहरु फेला पर्नेछन् भने व्यापार व्यावसायमा प्रशस्त आम्दानि हुनेछ । प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको भरपुर प्रयोग गरि आयस्रोतका बाटाहरु फराकिलो बनाउँन सकिनेछ । प्रेम प्रशङगले दिन रमाईलोका साथ बित्नेछ भने इच्छित सामानहरुको उपभोग गर्न पाईने हुनालेमन प्रशन्न हुनेछ भने दिल खोलेर सहयोग गर्नेहरु भेटिनेछन् । बुधबार बिहानदेखि शुक्रबार दिउँसो सम्मको समय मध्ययम रहेकोले वास्थ्य सम्बन्धि सामान्य समस्याले सताउनेछ भने दैनिक काम गर्न असहज महशुस हुनेछ । अनाबस्यक ठाउँमा श्रम तथा शक्ति प्रयोग हुनेछ ध्यान दिनुहोला ।
धर्म तथा सस्कृति बचाउँने अभियानमा तपाईको मुभिका महत्वपुर्ण हुन सक्छ । व्यापार व्यावसायमा लगानि बढाएर प्रशस्त आम्दानि गर्न सकिनेछ । राजनितिकर्मी तथा समाजसेवीहरुले जनताको काम गरेर प्रसिद्धि कमाउँने समय रहेको छ भने सम्मानित काम गरेर समाजमा नाम,दाम तथा ईज्जत प्रतिष्ठा कमाउँन सकिनेछ । नयाँ काम पाउँने तथा गरिरहेको काममा बढुवा हुने योग रहेको छ । बिद्या तथा प्रतिश्पर्धामा तपाईनै अग्र पंत्तिमा आउँनु हुनेछ । पारिवारिक माहोल तथा सांगितिक माहोलमा दिन बित्ने हुदा मन प्रशन्न रहनेछ । बिषेश गरि तरल पदार्थ तथा खनिज पदार्थ सँग सम्बन्धित बस्तुहरुको व्यावसाय फस्टायर जानेछ भने आम्दानिका नयाँ नयाँ स्रोतहरु फेला पर्नेछन् । सवारी साधन प्राप्तिको योग रहेको छ भने प्रेम प्रशङगले दिन रमाईलोका साथ बित्नेछ ।
Prevखाली पेटमा केही दिन खानुहोस् ल्वाङको पानी, यस्ता छन् फाईदा !
Nextदेखिन थाल्यो को’भिड–१९ जस्तै लक्षण भएको ‘स्क्रब टाइफस’ रो’ग !
किन बारम्बार स’ताउँछ सिन्धुपाल्चोकलाई पहिरोको प्रकोपले?